မကောင်းသော အတတ် ပညာ အတိုက် အခိုက် များရန်များ မှ ကင်းဝေးရအောင် ပြုလုပ်နည်း – အနုပညာရပ်ဝန်း
မကောင်းသောအတတ်ပညာများနှင့် ပြုစားစီရင် နှောက်ယှက်ခံနေရလျှင်သော်၎င်း ၊ သံသယဖြစ်နေလျှင်သော်၎င်း …. ။အခြားသောပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်နေလျှင် သော်၎င်း …. ။ကျွန်ုပ်တို့လက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့ ၊ ရှေးဆရာအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်း အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ .. ဂမ္ဘီရယတြာနည်းတစ်ခု လက်ဆောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ။
မြေစလောင်းဖုံး သန့်သန့် တစ်ချပ်ထဲကို ထုံးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။မြေဖြင့်ပြုလုပ်သော စလောင်းဖုံးဖြစ်မည်။ ( တခြားသော စတီး ၊ သံ ၊ ဒန် စလောင်းဖုံးများမရပါ)သကြားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပါ။လက်ခလယ်ဖြင့်မွှေပါ…။ အတွင်းဘက်တွေကို ပျံ့ သွား အောင် သုတ်ပါ။၎င်းမြေစလောင်းဖုံးကို ဧည့်ခန်း ၊ အလုပ်စားပွဲ ၊ ရုံးခန်းစားပွဲ ၊ ဆိုင်ကောင်တာပေါ်(မည်သည့်နေရာတွင်မဆို) တင်ပါ …